Halyeeyada reer Brazil oo kalsoonida kala laabtay Neymar Jr – Gool FM
(Paris) 13 June 2019. Xidgiga ugu qaalisan kubadda caga adduunka ee reer Brazil Neymar Jr ayaa lala xiriirinayaa inuu dhibaatooyin badan dhexda kaga jiro, waxaana ka mid ah inuusan fiicneyn xiriirka kala dhexeeya qaar ka mid ah saaxiibadiis iyo jamaahiirta, balse waxay wax walba sii xoogeysteen kaddib markii dhawaan lagu eedeeyay kiis ku saabsan kufsi.
Macalinka xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa dhawaan ka qaaday calaamada kabtanimada, kaddib dabeecadaha xun ee ciyaaryahanka, balse haatan wuxuu wajahayaa wax intaas kasii daran, maadaama uu dhaleceyno kala kulmay halyeeyada waaweyn ee kubadda cagta dalka Brazil.
Halyeeyga reer Brazil ee Pele oo 78 jir ah ayaa sheegay:
“Wey adag tahay in la difaaco Neymar, kaddib markii uu sameeyay wax walba ee ka baxsan kulmada kubadda cagta”.
“Waxaan kula kulmay 2 jeer yurub, waxaana ku iri: wiilyahoow, waxaa laguu hibeeyay wax walba, balse waxaad sameysay, waxay sii adkeeneysaa xaalada”.
Dhinaca kale halyeeyga reer Brazil ee Zico oo 66 jir ah ayaa dhankiisa sheegay:
“Neymar Jr wuxuu u baahan yahay inuu inbadan diirada saaro xirfada kubadda cagta, si uu ugu guuleysto wax muhiim ah, sida abaal marinta Ballon d’Or”.
Waa xusid mudan in dhawaan lagu eedeeyay Neymar Jr inuu kufsi u geystay haweeney isagoo ku sugan hotel ku yaalla magaalada Paris sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya dalka faransiiska.